कर्जा लगानीमा बैंकहरु आक्रमक, निक्षेपभन्दा १ खर्ब बढी ऋण लगानी, कुन बैंकको कति ?(सूचीसहित)
प्रकाशित : 9:53 am, मंगलबार, साउन ५, २०७८
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वाणिज्य बैंकहरुले आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका छन् । कोरोना र निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सहज नभए पनि बैंकहरुले उल्लेख्य रुपमा ऋण लगानी गरेका हुन् ।
वर्षको शुरुवाती र अन्तिमको ४ महिना बैंकहरुको व्यापार केही सुस्त भए पनि अन्य महिना बैंकहरुले उल्लेख्य कर्जा विस्तार गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले गत वर्ष (१ वर्षको अवधिमा) ७ खर्ब १४ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ८ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले १ वर्षको अवधिमा गरेको निक्षेप संकलनभन्दा १ खर्ब ४ अर्ब बढी कर्जा लगानी गरेका हुन् ।
पछिल्लो १ वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानी योग्य रकम) हुँदा बैंकहरुले उल्लेख्य मात्रमा कर्जा लगानी गर्न सफल भएका हुन् । गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा अधिक २ खर्बसम्म तरलता रहेको थियो । यद्यपि, केही महिनामा भने तरलता कम हुँदा बैंकहरुले अन्तर बैंक सापटी लिएर समेत कर्जा लगानी गरेका थिए ।
गत वर्ष असोज, चैत र असारमा बैंकहरुको निक्षेप संकलन उच्चदरले बढे्को देखिन्छ भने असोज, पुुस, चैत र असारमा आक्रमक कर्जा विस्तार गरेका छन् । वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै बैंकहरुले २ खर्ब ११ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ७० अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।
गत वर्षको असार मसान्तसम्म बैंकहरुले कुल ४२ खर्ब १ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ३७ खर्ब २१ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । अघिल्लो आव २०७६/७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ३४ खर्ब ८७ अर्ब निक्षेप उठाएर २९ खर्ब ३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
व्यापार विस्तारमा एनआइसी एशिया अग्रस्थानमा
गत वर्ष व्यापार विस्तारमा एनआइसी एशिया बैंक सबैभन्दा आक्रमक देखिएको छ । असार मसान्तसम्ममा एनआइसीले ३ खर्ब निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ६४ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । यो २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हो ।
१ वर्षको अवधिमा एनआइसी एशियाले निक्षेप संकलन ८९ अर्बले बढाएको भने कर्जा विस्तार ९१ अर्बले वृद्धि गरेको छ ।
यस्तै, चुक्ता पूँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमई धेरै व्यापार गर्नेमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष बैंकले २ खर्ब ८३ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ४२ अर्ब ऋण लगानी गरेको छ । ग्लोबलले गत वर्षमा ५६ अर्ब निक्षेप र ४२ अर्ब कर्जा लगानी बढाएको छ ।
यस्तै, गत वर्ष निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा नेपाल बंगलादेश बैंक सबैभन्दा पछि परेको छ । असारसम्म बंगलादेश बैंकले ८९ अर्ब निक्षेप संकलन गरी जम्मा ७१ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।
८ बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत माथि
गत वर्षमा आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुको कर्जा निक्षेप तथा पूँजी (सीसीडी) अनुपात औसतमा ५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो असार मसान्तसम्म औसतमा ७२ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको सीसीडी अनुपात गत वर्षको असार मसान्तसम्म आइपुग्दा बढेर औसतमा ७७ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार असार मसान्तसम्म ८ बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ भने १७ बैंकको औसतभन्दा माथि पुगेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा माथि सीसीडी रेसियो पुर्याउने बैंकमा सिभिल, एनआइसी एशिया, मेगा, माछापुच्छ्रे, कुमारी, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा र सनराइज बैंक रहेका छन् ।
असार मसान्तसम्ममा मेगा बैंकको सबैभन्दा धेरै सीसीडी अनुपात रहेको छ । यसको यस्तो अनुपात ८२.०२ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय आक्रमक कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुको सीसीडी अनुपात क्रमशः एनआइसीको ८१.१२ सिभिलको ८०.३८, कुमारीको ८१.०१ , माछापुच्छ्रे ८०.०९ सानिमा ८०.६०, सिद्धार्थ बैंकको ८०.१५ र सनराइज बैंकको ८०.४१ प्रतिशत रहेको छ ।
असारसम्म सबैभन्दा कम सीसीडी अनुपात नेपाल बंगलादेश बैंकको ६७.३७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, कम सीसीडी हुनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६९.७४ प्रतिशत,एभरेस्ट बैंकको ७२.६२ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७३.१७ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ७३.३३ प्रतिशत रहको छ ।
« एकैपटक दुई कम्पनीको आइपीओ खुल्यो, कति कित्ता भर्ने ?
लक्ष्मी उन्नति कोषको आकर्षक लाभांश घोषणा »